Ingabe iParis-Nice umjaho wasesteji? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Umjaho wamabhayisikili omuhle waseParis - izinqumo ezisebenzayo
Umjaho wamabhayisikili omuhle waseParis - izinqumo ezisebenzayo
Ingabe iParis-Nice umjaho wasesteji?
EParisKuhlekuyinto ngebhayisikili okhokhelwayoumjaho wasestejieFrance, ebanjwa minyaka yonke kusukela ngo-1933. Inkambo yamagquma ezinsukwini zokugcina ze-umjahoumusaisigabaabagijimi abavame ukulwela ukunqoba. Umnqobi wakhe wakamuva kakhulu nguMaximilian Schachmann waseJalimane.
Ngubani ozowina iParis-Nice 2021?
Ude kangakanani umjaho waseParis-Nice?
UMax Schachmann (Bora-Hansgrohe) ubanga ukunqoba okuphindwayo okuphelele ku-EParis-Kuhlengemuva kokuhola okuqinile kukaPrimoz Roglic (Jumbo-Visma) emizuzwini engama-35 ekumeni sekuhwamukile esigabeni sokugcina esibuhlungu.
Ngabe uPeter Sagan useParis-Nice 2021?
126km ukuya esiteji kanti inqwaba iyaqhubeka nokugibela kube munye. Inqwaba ibambe ama-32km esiteji njengoba singena ehoreni lesithathu lokusebenza. 05:01:57 - Mashi 11,2021.UPeter Saganusesendleleni ebuyayo ngemuva kokuhlolwa kwakhe okuhle kwe-COVID-19.
Size enyakatho yeFrance ngosizo lwabangani bethu baseShimano ukubona ukuthi amaqembu azilungiselela kanjani lo mjaho wasendle wosuku olulodwa. Ikakhulukazi, sizogxila kumalungiselelo weBORA-hansgrohe impumelelo yomshayeli wabo wezinkanyezi uPeter Sagan, owine unyaka owedlule. IParis-Roubaix ngumjaho wezinsuku ezinkulu kakhulu futhi ongcono kakhulu wesizini.
Futhi kungenye yezinhlanga ezimbalwa lapho abagibeli beguqula khona njalo futhi bashintshe amabhayisikili abo nemishini. Kungani? zazo amatshe ayigobolondo. Amakhilomitha angama-54 alaba bantu ababi ahlakazekile kulo mzila wamakhilomitha angama-257 futhi ayinselelo enkulu kubashayeli nemishini yabo. (umculo othulile) Amaqembu amaningi asebenzisa amabhayisikili akhethekile eRoubaixin ukugoqa i-asphalt.
ukuthwala kanjani izinto ngebhayisikili
Ithimba likaSagan alikho ngaphandle, basebenzisa iRoubaix entsha ekhethekile. Into emnandi ngayo ukuthi empeleni inokumiswa ngendlela yale Future Shock. Futhi lokho kufanele kuthambise amatshe e-cobble ngangokunokwenzeka.
Futhi ngo-2019 futhi inendawo yokukhiya ngaphandle ngakho-ke ingaba umnyango wokwenza ibhayisikili liqine futhi lisebenze kangcono uma lingasetshenziswa. Kepha ukukunikeza umbono wokuthi unonya kangakanani lo mjaho, kufanele baze bashintshe izimoto zeParis-Roubaix. Ngakho-ke lena ngenye yezimoto zeqembu le-BORA futhi empeleni inepuleti elikhethekile elibekwe ngaphansi ukuvimbela amatshe amatshe angcolile ukuthi angalimazi ngaphansi kwemoto.
Kuhle ngokwengqondo. Olunye ushintsho olukhulu olwenziwe ngabagibeli lushintsha uchungechunge lwangaphakathi olungamazinyo angu-39 lwaba u-42 noma u-44.
Angiqiniseki kahle ukuthi kungani futhi angikaze ngiyibone ithengiswa ngakho-ke ngizocela uBert, waseShimano, ukuthi achaze kabanzi ngayo. Ngilapha noBert Roesems waseShimano, uShimano uxhasa amaqembu ayisikhombisa eWorldTour aya eParis-Roubaix, kodwa nginentshisekelo enkulu yokuzwa ukuthi uShimano uwasiza kanjani lawo maqembu eParis-Roubaix ngoba afuna imishini kakhulu. , ukwesekwa kwethu okuyinhloko kulapho siletha lawo machungechunge akhethekile, lawo magiya akhethekile abafana abafuna ukusebenzisa iParis s-Roubaix.
Ngokuyinhloko okungama-53 okungahlanganiswa nochungechunge lwama-44, lokhu kufakwa kwamaketanga okungu-44 kukhulu kunalokho, lokho indinganiso yakho engakusebenzisa njengenketho yakho enkulu yangaphakathi futhi eyi-30/90 - ngakho-ke i-53/39 iyisethi ejwayelekile yeketanga - lokhu is the standard chain set - Ngingathenga futhi ungathenga ezitolo, kepha kungani singatholi ama-53/42 abawasebenzisayo futhi kungani basebenzisa u-53/42? 42 noma 44 ngoba bafuna ukunqamula lezi zingxenye ezigandayiwe ngejubane elifanele kodwa bazame ukuba lula emilenzeni yakho uma kungenzeka babhekane nomoya ovunguzayo noma uma kuyisigaba esigandayiwe esingaphansi noma esisezingeni elingelona elifanele obhekene nalo elingu-53 / 44 ukusethwa ngekhasethi elingu-11/28 noma elingu-11/30 lizoba namagiya amaningi aphindayo kabili. Ngakho-ke uma ugibela ukuxhumeka kabili ngaphambili nangama-sprocket ayi-11 ngemuva kusuka kumbono wabathengi, ufuna ukuba nezinketho eziningi ngangokunokwenzeka. Yikuphi kwalaba bashayeli abangochwepheshe bomjaho othize njengeParis-Roubaix ye-m akudingekile.
Bafuna isivinini esikhulu, impintsha egcwele phezu kwamatshe amatshe asebenzayo, abafuni ukwabiwa okuhle kwamagiya ngoba nabo kufanele bazi kahle ukukhuphuka okukhethekile noma yini. - Ngakho-ke ayiwi kanjani, yini umehluko? - Sinesakhiwo esisodwa, ngakho-ke ungqimba olungeziwe ngaphakathi kochungechunge lwakho lwangaphandle oluvimbela ukuthi uchungechunge lungabanjwa phakathi - futhi lokhu kutholakala kuphela kochwepheshe - lokhu kutholakala kuphela kochwepheshe, lokhu kuyinto evela kwezemidlalo umnyango wezokumaketha uya kumaqembu axhasiwe nawo wonke amaqembu aqhuba iShimano - Ngingaba nayo eyodwa, ungangitholela eyodwa? - Sizoxoxa ngekhamera - Kulungile. (umculo othokozisayo) Ngibheke amabhayisikili amanye amaqembu, kepha ikakhulukazi maqondana neBORA-hansgrohealle bonke abashayeli abagibela iParis-Roubaix banento eyodwa abafana ngayo nezithuthuthu zabo, futhi lokho ukuthi banezibambo ezinezinqamu ezijikelezayo futhi akekho ophethe i-Aero profile.
Abaningi balaba bagibeli, kufaka phakathi uSagan, basebenzisa ibha yokubamba ye-aero ukuthola inzuzo eyengeziwe enikezwa isikhathi esiningi, kepha f noma uRoubaix ubashintshile, futhi bengizibuza ukuthi kungani lokho bekungukuthi bathi ibha eyindilinga ngokunethezeka kancane, ithambeka kakhudlwana futhi ayidlulisi ukudlidlizela okuningi njengama-aero handlebars ukuthambisa ukudlidliza okubulalayo kwamatshe amatshe, ngicabanga. Okuthile esivame ukubona ukulungiswa eParis-Roubaixis, ikakhulukazi ku-cockpit enezinsimbi ezengeziwe zamagiya, izinkinobho kanye nama-brake levers ngaphezulu. - Yebo, njengoba ubona kuleli bhayisikili, sinezinkinobho ezimbili ezincane.
Ngakho-ke ungakwazi ukukhuphuka ngesandla esisodwa bese wehla ngesinye isandla. Ngakho-ke acishe afane kakhulu nezinguquko zethu zesizukulwane sokuqala seSprint, ebeziyinkinobho encane nje encane. Umehluko ukuthi le firmware ingarekhoda nxazonke ngezilungiselelo zakho uma ngabe ubene-light set noma i-telescopic support noma yini engaxhunywa kulokhu.
Awukwazi ukulawula amagiya kuphela, kodwa futhi ungalawula ezinye izinto ebhayisekilini lakho ngayo, okuqinisekisa ukuthi akudingeki ukuthi ubeke izandla zakho kabusha lapho ufuna ukushintsha amagiya. Ngakho-ke uma ushayela phezu kwamatshe ayigobolondo, ungabeka izandla zakho phezulu kwamabhande bese uqhubeka ushintsha izigaxa ezakhiwa ngamatshe ayizigaxa, kungani abagibeli bengakhethi unxantathu ongemuva weShimano RX onebhande elihlanganisiwe? Nangempela senze i-athikili ngakho futhi kuyamangaza impela ukuthi isebenza kanjani futhi igcina kanjani uketanga lapho ihamba phezu kwamaqhubu amabi, kodwa nami ngazibuza lokho futhi ngabuza uShimano, nami ngabuza iqembu futhi baba nempendulo eyodwa enhle. Ngokusobala iTrek, nayo eyiqembu elixhaswe yiShimano, izame ngonyaka owedlule futhi yathola ukuthi ayizuzisi kangako ngokusebenzisa amatshe ayigobolondo.
Inenzuzo, kepha lokho kusezindaweni ezi-rougher, imvuthuluka kanye nezinto ezimbi kakhulu. Kepha ngamatshe e-cobblestones, unxantathu ongemuva we-DURA-ACE ongemuva ungaphezu kokwanele. Ngeke uthole noma yiziphi izingqinamba ngamaketanga awayo noma yini efana naleyo ngalolu shintsho.
Esikhathini esedlule sibonile ama-hacks amaningi nama-bodger afana ne-double bar bar kampompi nokufakwa kwe-gel. Angikaboni lutho lwalokho kulo nyaka nesinye sezizathu sokuthi amasondo emabhayisikili manje enzelwe amathayi abanzi, ahlinzeka ngokuxoshwa okuningi. Endabeni yamasondo, kunokuthile okuthakazelisayo ukubona lapha, futhi kujule kakhulu.
Uneminyaka engama-50 noma engama-64 futhi lokho akujwayelekile neze. Esikhathini esedlule, yize amabhayisikili e-carbon ayetholakala, abagibeli babevame ukuncanyelwa ekujuleni okungatheni ngoba kutholakala ukuthi bakhululeke kakhudlwana. Kepha manje amasondo enzelwe amathayi abanzi, angenziwa ngokusebenzisa isondo elikhudlwana levolumu.
isinongo samathanga esiningi kakhulu
Njengoba kwaziwa, uMat Hamann uwine ngebhayisikili le-aero. Futhi abashayeli sebeqala ukukuqaphela lokhu futhi bakuthatha ngokungathí sina. Futhi yingakho iqembu lonke lisebenzisa okungenani amasondo angama-50 millimeter ajulile kulo magazini.
Siphinde sibe ne-aerodynamics ngemuva kwezingqondo zethu, ukuze singaboni noma iyiphi i-levers kuma-disc brake axles. Kholwa noma ungakukholwa, lokhu kungumugqa oholayo ongangeza kakhulu kwi-aerodynamics yebhayisikili. Ungagcina ama-watts ambalwa ngokususa i-thru-axle lever.
Futhi imishini ye-BORA inesixazululo esihlakaniphile. Empeleni basebenzisa i-drill esethelwe ku-torque nge-Allen wrench ekugcineni futhi bakholelwa ukuthi uhlobo oluthile lwesibhamu sokukhetha i-Formula 1 bacabanga ukuthi singashintsha amasondo ngokushesha kunokuyisebenzisa ukukhishwa okusheshayo okujwayelekile. Kuphola kangakanani lokho Futhi lokho kungenxa yokuthi azikho lezo zinotshi ezincane lapho kufanele ulethe khona impeller.
Mane uyidonsele ngaphakathi, ikhiphe, iyidonsele ngaphakathi, yenziwe. Ngicabanga ukuthi lokho kupholile impela. Kepha ngithanda ukukubona njengomjaho ophikisana nokukhululwa okusheshayo, mhlawumbe kufanele sikwenze lokho endatshaneni ezayo. (Umculo ojabulisayo) Kumele kube yicala elinzima lokushayela iParis-Roubaix, siyazi, kepha ngicabanga ukuthi amaqhawe amakhulu angaziwa yimishini ngoba kufanele enze umsebenzi ongahlekisi.
Cishe umsebenzi omningi kulo mjaho kunanoma yimuphi omunye umjaho ngenxa yayo yonke imishini ekhethekile. Isibonelo amasondo, kufanele asuse wonke amasondo emasondweni abawajwayele ukuwasebenzisa, imvamisa amamilimitha angama-25, kuthi uma i-BORA iwafaka amathayi angama-30-millimeter. Kepha uma lokho sekuphelile, kufanele uphinde ususe futhi ubeke ama-25s kubhavu ngoba uyisigaxa, sebenzisa i-glue, ikhambi futhi kuthatha izinsuku ezimbalwa ngevili ngalinye, kungumsebenzi omkhulu.
Futhi-ke kufanele basethe amabhayisikili. Amasondo eRoubaix ngokumiswa kwawo okusetshenziswa yiBORA awasetshenziswa ngempela kweminye imijaho eminingi phakathi nonyaka, mhlawumbe esiteji seTour. Ngakho-ke futhi kufanele basethe ngokuphelele lonke iqembu lezithuthuthu ngemodi ephelele yokujaha ngokuya ngemininingwane yomshayeli ngamunye.
Futhi akuyona ibhayisikili nje kuphela, wonke umgibeli unaso esinye isipele. Ngakho-ke empeleni kunenombolo encane ngemuva kwebhayisikili likaDaniel Oss. Okubili, okusho ukuthi ibhayisikili lakhe lesibili.
Futhi manje, uPeter Sagan, unezine Ngakho-ke ungacabanga ukuthi ungakanani umsebenzi walaba bantu. Amaqhawe aphelele. (umculo othokozisayo) Naphezu kwakho konke ukulungiswa nokulungiswa abashayeli abangakwenza, akukho lapho kungaphunyuka khona ukuthi ukushayela ngamatshe ayizigaxa njengaleli elikwi-laboratory yefolda yemoto kubuhlungu.
Kubuhlungu okuncane kunalokho okwakukhona eminyakeni engama-30 eyedlule ngemishini ababenayo emuva ngaleso sikhathi, kepha kusababuhlungu, futhi abagibeli abaphikelelayo, abazimisele, abanamandla kunabo bonke futhi abanamandla kunabo bonke abake banqoba emjahweni njengempi ye-attrition efana IParis-Roubaix is ​​Uma umdlalo uba nganoma iyiphi indlela ongabikezela ungaba yisicefe kanti iParis-Roubaix ayilutho ngaphandle kwalokho. Ngakho-ke ngithemba ukuthi uyijabulele le ndatshana futhi uma kunjalo ngicela uyinike isithupha bese ubhalisela i-GCN -Channel. Futhi ukubona okuqukethwe okuningi okuhlobene ne-cobblestone, ungachofoza ukuthi uyaphusha.